स्क्रब टाइफसबारे थाहा छ ? - Naya Patrika
स्क्रब टाइफसबारे थाहा छ ?
प्रायः जाडो मौसममा स्क्रब टाइफस देखिन सक्छ । तर, यो समस्या अन्य मौसममा देखा नै पर्दैन भन्नेचाहिँ होइन । मुसाको शरीरमा हुने किर्नाको टोकाइबाट मानिसमा स्क्रब टाइफस हुने गर्छ । मुसाको शरीरमा पाइने माइट नामक किर्नाको टोकाइबाट यो रोग लाग्ने हो । त्यसैले मुसाको वासस्थानमा रहदा सतर्क हुनुपर्छ । यसको किर्नाले विशेष गरी कापा, घाँटी या काखीमुनि टोक्ने गर्छ।
स्क्रब टाइफस भएको व्यक्तिलाई अत्यधिक ज्वरो आउने हुन्छ । विषेशगरी शरीरभित्र ज्वरो, कामज्वरो आउने हुन्छ । शरीरका ग्रन्थीहरू सुनिने, टाइफाइड हुनेजस्ता लक्षण पनि देखिन्छन् । टोकेको ठाउँमा कालो र ठूलो दाग देखिन्छ । सामान्यतया किर्नाले तोकेको १० देखि १२ दिनमा यो यस्तो लक्षण देखिने गर्छ । कहिलेकाहीँ यो अवधि २० दिनसम्म पनि लम्बिन सक्छ।
स्क्रब टाइफसको उपचार सजिलै तरिकाले गर्न सकिन्छ । एन्टीबायोटिक प्रयोग गरेको ४८ घण्टामै यसबाट बच्न सकिन्छ । यो रोगको लक्षण थाहा पाउनासाथ चिकित्सककहाँ गइहाल्नुपर्छ । रगत जाँचपछि मात्र स्क्रब टाइफसबारे थाहा लाग्छ ।
स्क्रब टाइफस भएका व्यक्तिबाट अरूलाई यो रोग सर्दैन । तर, मुसामा हुने माइट नामक किटाणुबाट यो रोग सर्न सक्छ । जुन एरियामा स्क्रब टाइफसका किटाणु देखिएका छन् त्यो क्षेत्रमा सकभर जानुहुँदैन । या उक्त ठाउँलाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ ।